အဝေးထိန်းထုတ်လုပ်မှုနှင့်အုပ်စုလိုက်တည်းဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို Enable လုပ်ရန် EditShare နှင့် Adobe တို့ပူးပေါင်းပါ NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Remote Production နှင့် Group Editing Workflows များကို Enable လုပ်ရန် EditShare နှင့် Adobe ပူးပေါင်းပါ
ဘော်စတွန်၊ MA - ၂၀၂၀ မေလ ၂၇ ရက် EditShareဗွီဒီယိုအကြောင်းအရာဖန်တီးသူများအတွက်လုံခြုံသောမီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်အသိဥာဏ်ရှိသောသိုလှောင်မှုဆိုင်ရာဖြေရှင်းနည်းများကိုအထူးပြုသည့်နည်းပညာခေါင်းဆောင်®သည်အဆုံးမှအဆုံးသို့ဝေးလံသောအဝေးမှထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပူးပေါင်းတည်းဖြတ်ရေးလုပ်ငန်းအသွားအလာများကိုမြှင့်တင်ရန်Adobe®နှင့်အတူပူးပေါင်းပါ ၀ င်သည်။ တစ် ဦး ချင်းစီဇာတ်လမ်းပြောပြသူများမှသည်လုပ်ငန်းခွင်တွင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ့များအထိထူးခြားသောအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုဖန်တီးပေးခြင်း EditShare တည်းဖြတ်ခြင်းသည်လုပ်ငန်းအသွားအလာများကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သောမီဒီယာဂေဟစနစ်တစ်ခုသို့နက်ရှိုင်းသော metadata ခြေရာခံခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ခြင်းကိုချောမွေ့စွာချိတ်ဆက်သည်။ ရူပဗေဒဆိုင်ရာ၊ ဟိုက်ဘရစ်ဖွဲ့စည်းမှုတွင်ဖြစ်စေ၊ Adobe Premiere ® Pro အတွက် Flow panel အသစ်သည်အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှု၊ proxy နှင့်အဝေးမှတည်းဖြတ်ခြင်းနှင့်တည်းဖြတ်သူများအတွက်လုပ်ငန်းအသွားအလာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်း EditShareEFS ၏ပွင့်လင်းသောသိုလှောင်မှုစနစ်သည် Premiere Pro ရှိ Productions များအတွက်စီမံကိန်းသော့ခတ်ခြင်းကိုအပြည့်အဝထောက်ခံမှုဖြင့်ပူးပေါင်းတည်းဖြတ်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ Productions အင်္ဂါရပ်နှင့်အတူ Premiere Pro သည်စွမ်းဆောင်ရည်အမြင့်ဆုံးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားစဉ်ထူးကဲသောပိုင်ဆိုင်မှုအရေအတွက်ဖြင့်စီမံကိန်းများကိုကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ ထိုပိုင်ဆိုင်မှုများကိုမျှဝေခြင်းနှင့်စုစည်းခြင်းသည်ယခင်ကထက်ပိုမိုလွယ်ကူသည် အသေးစိတ်ဖတ်ရှုပါ PremShie Pro ရှိ Productions ဆိုင်ရာ EditShare ၏ဘလော့ဂ်.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်တွေအတွက်ပူးပေါင်းဒီဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းအသွားအလာတွေကိုတည်ဆောက်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Flow နှင့် EFS မိတ်ဖက်တိုးတက်မှုများ၏အခြေခံမောင်းနှင်အားတစ်ခုဖြစ်သည်။ မှတ်ချက်များ Sunil Mudholkar, ကုန်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု၏ဒုတိယသမ္မတ, EditShare. “ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖြေများကိုသိုလှောင်မှုဖိုင်စနစ်အထိအဆင့်အမြင့်ဆုံးအဆင့်မှအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းဖြင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဖန်တီးသူများသည်မည်သည့်နေရာ၌မဆို Adobe tool များနှင့်အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီးအကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံရှိနိုင်သည်။ Premiere Pro အတွက် Flow Panel နှင့် EFS ၏ပံ့ပိုးမှုကအသုံးပြုသူများအားအရေးကြီးသောအကြောင်းအရာများကိုရှာဖွေရန်နှင့်ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်ပူးပေါင်းရန် Adobe Premiere Pro မှထွက်ခွာသွားခြင်းမရှိသော ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ နက်ရှိုင်းသောသိုလှောင်သိုလှောင်ခန်းထဲသို့နက်နက်နဲနဲနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းလေ့လာနိုင်စေသည်။ UI ။ "
အယ်ဒီတာများနှင့်ဖန်တီးမှုအဖွဲ့များသည်လုပ်ငန်းအသွားအလာပြissuesနာများကိုမစဉ်းစားဘဲကြီးကျယ်သောပုံပြင်များကိုပြောပြလိုကြသည်။ Adobe ဗီဒီယို၏မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးဌာနအကြီးအကဲ Sue Skidmore ကပြောကြားသည်။ "Adobe နှင့်အကြားပူးပေါင်း EditShare တီထွင်မှုတစ်ခုချင်းစီမှကြီးမားသောအုပ်စုများအထိကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများကို၎င်းတို့သည်ဝန်းကျင်တွင်ဖြစ်စေ၊ ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဖြစ်စေဖြစ်စေ၊ Cloud တွင်ဖြစ်စေဖြစ်စေအတွေ့အကြုံများစွာရရှိစေသည်။ ”
ဇာတ်ကြောင်းပြောပြရန်အတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရန် Flow သည်မီဒီယာနည်းပညာတစ်ခုလုံးကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ကိရိယာများနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာများကိုအထပ်အလွှာများ၊ အနိမ့်အမြင့်များနှင့် Cloud သိုလှောင်မှုပတ် ၀ န်းကျင်ကိုစီမံသည်။ ဝေးလံခေါင်ဖျား။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာထုတ်လုပ်မှုများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော၊ လုံခြုံသည့်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် Flow သည်အဆင့်မြင့် proxy-based workflow ကို codecs 500 ကျော်အတွက်အထောက်အပံ့ပေးသည်။ ၎င်း၏တိုးမြှင့်ထားသော Premiere Pro panel သည်သီးခြားတည်းဖြတ်သူများနှင့်ထုတ်လုပ်ရေးအဖွဲ့များကို Flow media ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်၎င်း၏ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုအဓိကထားသောကိရိယာများကိုကျယ်ပြန့်သောပိုင်ဆိုင်မှုခြေရာခံခြင်း၊ ပူးတွဲ proxy တည်းဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်မြို့ကြီးများ၊
EFS ၏အရွယ်အစားသိုလှောင်နိုင်သည့်သိုလှောင်မှုသည်မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများအားစီမံခန့်ခွဲသူများနှင့်နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူများအားပြည့်စုံသောသိုလှောင်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာကိရိယာများတပ်ဆင်ထားစဉ်ရဝုဏ်အတွင်း၊ မိုးတိမ်သို့မဟုတ်မျိုးစပ်တပ်ဆင်ခြင်းများ၌ကျယ်ပြန့်စွာပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုများကိုတည်ဆောက်နိုင်သည်။ Adobe အယ်ဒီတာများအတွက် EFS သည် Premiere Pro ရှိ Productions များကိုထူးကဲသောအထောက်အပံ့ဖြင့်လျင်မြန်။ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသိုလှောင်မှုဖြစ်သည်။ Mudholkar ကထပ်ပြောသည်, "Creative များသည်မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်းတစ်ခုလုံးကိုလေ့လာသင်ယူရန်မတတ်နိုင်တော့ပါ။ ပေါ့ပေါ့တန်တန် Flow panel သည် Premiere Pro နှင့်တိုက်ရိုက်ကိုက်ညီပြီး EFS သည်မီဒီယာကိုလုံခြုံစေပြီးစီမံကိန်းများကိုစနစ်တကျထိန်းသိမ်းထားသောအခြေခံအရောင်းအ ၀ ယ်များကိုပံ့ပိုးနေစဉ်၊
အထူး EditShare Adobe လုပ်ငန်းအသွားအလာအတွက်အစုအဝေး
အကန့်အသတ်ဖြင့်သာ EditShare Flow media management, EFS open storage solution နှင့် Helmut workgroup management tools များပါ ၀ င်သည့် Adobe Adobe workflow အစုအဝေးကိုပေးအပ်သည်။
တီထွင်ဖန်တီးမှုများ၊ အကြောင်းအရာများနှင့်မီဒီယာပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းပညာများကိုဆက်သွယ်ပေးသည့်အားကောင်းသောသိုလှောင်မှုနှင့်မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်းသည် EFS နှင့် Flow ကိုပံ့ပိုးပေးသည်။ လုပ်ငန်းအဆင့်အထိအတိုင်းအတာနှင့်အညီ Adobe အတွက်လုပ်ငန်းအသွားအလာအစုအဝေးသည် Premiere Pro လုပ်ငန်းအဖွဲ့များနှင့်ဖြန့်ဝေထားသောအဖွဲ့များကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ကိရိယာများဖြင့်ဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းအသွားအလာအတွက်တည်ဆောက်ထားသောမီဒီယာဖောင်ဒေးရှင်းကိုပေးထားသည်။ ရှုပ်ထွေးသောလုပ်ငန်းခွင်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်၊ EditShare အစုအဝေးအား optional ကိုတိုးချဲ့မှုအဖြစ် Helmut tools များ၏ suite ကိုပေးထားပါတယ်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ သွားရောက်ကြည့်ရှုပါ ဒီမှာ.
ပါဝင္ရန္ EditShare Adobe နှင့်မေလ ၂၈ ရက်နေ့တွင်
Adobe နှင့်ဆက်သွယ်ပါ EditShare ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ မေလ ၂၈ ရက်ကြာသပတေးနေ့၊ EDT ညနေ ၁၂း၀၀ နာရီတွင်အဖွဲ့နှင့်အဖွဲ့သည် Adobe Premiere Pro နှင့်အတူထုတ်လုပ်ခြင်း၊ အုပ်စုဖွဲ့တည်းဖြတ်ခြင်းနှင့်အဝေးထိန်းလုပ်ငန်းအသွားအလာဆိုင်ရာပူးတွဲဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုအတွက် 28:2020 EDT တွင်ပြုလုပ်သည်။ အချိန်ကာလတစ်ခုတစ်ခုအတွက်မှတ်ပုံတင်ရန် ကျေးဇူးပြု၍ ဝင်ရောက်ပါ
editshare.live/webinar052820session1pr (12:00 pm တွင် EDT) နှင့် editshare.live/webinar052820session2pr (ည ၉း၀၀ EDT)
ယခင်: AY Productions များသည်လူကြိုက်များသော Live Live ဖြစ်ရပ်များအတွက် Pliant Technologies 'CrewCom သို့ပြောင်းလဲသွားသည်
နောက်တစ်ခု: Broadcast Pix သည်ရုံးတည်နေရာအသစ်ကိုကြေငြာသည်